Etu esi egbuji imeju? - Afrikhepri Foundation
Tọzdee, Ọktọba 29, 2020
Etu esi edochi imeju
Esi ewepu imeju?
Lọ bụ imeju bụ akpa nzacha na ahụ mmadụ. Ọ gaghị ekwe omume inwe ahụike dị mma na-enweghị ezigbo imeju na-arụ ọrụ. Ọ bụ ihe nwute, ka oge na-aga, anyị na-arụ ọrụ karịa ya ma na-achọ ya nke na anyị ga-emerịrị na-arịa ọrịa. N'ime usoro iwughari na imezi imeju, ị ga-eme ya:
wepu oke abụba
iji mee ka bile na-aga n'efu
kpochapụ ihe ndị na-egbu egbu na imeju na-ehichapụ
gbasaa ma gafee nkume ndị gbakọtara
weghachite ọnya imeju na imeju ndi ozo
Mgbe akpụkpọ ahụ gasịrị, imeju bụ akụkụ kachasị ukwuu na ahụ. N'ọtụtụ ụzọ, nke a bụ ihe kachasị mkpa, na nke ikpeazụ na-abata n'uche ma a bịa n'ihe gbasara ahụike. Na mgbakwunye na ịbụ nke buru ibu, imeju bụkwa akụkụ ahụ dị mgbagwoju anya gụnyere ma ọ dịkarịa ala ọrụ 200 dị iche iche. N'ikwu okwu n'ozuzu, imeju na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịchịkwa, ịkọkọ, ịchekwa, izu nzuzo, ịgbanwe na ikewapụ ọtụtụ ihe dị iche iche na ahụ. Kpọmkwem, nke a gụnyere:
nlekọta nke abụba echekwara
nhicha ọbara na mkpochapu ọbara
nkwụsị na mbibi nke poisons
njikwa nke chemicals na ọgwụ ọjọọ na ọbara
enyemaka nyere usoro nchịkọta site na mmepụta bile
inye aka na iguzogide oria site na imeputa ihe ndi aghaghi agha
nchekwa nke vitamin, mineral na sugars
mmepụta ngwa ngwa ngwa ngwa mgbe mkpa bilitere
nchịkwa mmepụta na excretion nke cholesterol
nhazi mmezi nke hormonal
nchịkwa nke anụ ahụ mebiri emebi
Imeju dị oke mkpa maka ọdịmma anyị nke na ọtụtụ ndị na-agwọ ọrịa na-arụ ụka na ọtụtụ ọrịa enweghị ike ibulite ahụ (ya bụ, n'eziokwu, ọ dịghị ụdị cellular degeneration nwere ike ime) ma ọ bụrụ na imeju na-arụ ọrụ nke ọma. oru oma na ike. N'aka nke ozo, imeju ojoo nwere ike obu isi iyi nke nsogbu ojoo kachasi ike.
Ya mere, ihe na-emebi imeju?
A nri bara ọgaranya protein. Mmetụta nke protein na-etinyekarị na imeju ebe ọ bụ na imeju na-eme ka protein dị mgbagwoju anya mee ka ha ghọọ ogige. Ka anyị na-eri protein, otú ahụ ka a na-arịọjujujujujujujujujujujujuju.
A nri bara ọgaranya na carbohydrates. Ahụ na-agbanwe ụfe nke carbohydrates dị mfe n'ime triglycerides, bụ nke e debere n'ime imeju dị ka lipids. Kababa abụba dị n'ime imeju, otú ahụ ka imeju na-arụ ọrụ zuru oke.
Rie oke. Nnukwu ngụkọta enzyme na nri na-ebubajujujujujujujujujujujuju.
Ọgwụgwụ ọgwụ. Fọrọ nke nta niile ọgwụ ọjọọ eme ihe anyị na-(ma ọgwụ ọgwụ ọjọọ, ntụrụndụ, na-anara ọgwụ, ihe ọ bụla) na-esichara, ọcha na nụchara anụcha na imeju - iji kwadebere maka ha mkpochapu si ahụ.
Mmanya na-aba n'anya na-eme ka ọnyá nke imeju ya. Ozugbo enwere mgbu nke imeju, ọ gakwaghị enwe nsị, nke na-akpata nsị nke abụba na njọ nke nsị nke imeju. Ọ bụrụ na anyị aṅụbiga mmanya na-aba n'anya, anyị na-emeju umeji imeju na ume, na njedebe bụ imejujuju (ma ọ bụ hardening).
Toxins, arọ ọla na pesticides. Ihe niile ị na-eku ume, ihe ọ bụla ị na-eri ma nke anụ ahụ na-etinye na ya dị ọcha ma nụchaa ya.
Enweghị mmega ahụ na-egbochi imeju ịrụ ọrụ mkpochapu nke na-emekarị site n'akpa ume na akpụkpọ ahụ.
Ma n'ezie, enwere ọrịa imeju dị ka ịba ọcha n'anya nke C.
Kedu ihe mgbaàmà nke arụ ọrụ imeju?
Ahụike na hay fever
ibu oké ibu
Ya mere ihe a ga-eme iji dozie ọnọdụ a
N'ụzọ dị mma, imeju nwere ikike dị ịtụnanya maka ịmaliteghachi - ọ bụrụ na ị nye ya ohere. Inye ya ohere pụtara ihe abụọ:
VIkwesiri iwepu (ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ịkpụ) ihe jupụtara na imeju na nri gị. Onye ị na-arịa ọrịa, otú ahụ ka ọ ga-adịkwu mkpa ka ị nweta nri dị mma. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu imeju dị oké njọ, nri nri raw pụrụ ịdị mkpa iji nye imeju gị ohere ịmegharị.
Ugboro ugboro n'afọ, ị ghaghị ime nsị detoxification maka imeju gị. Ngwakọta ọcha nke betaine hydrochloride na enzymes pancreatic bụkwa ezigbo enyemaka.
Ị kwesịrị ị na-agụnye nkwado anụ ahụ nke imeju mgbe nile. Chọọ maka usoro nke nwere mmiri ara ehi, thistle, dandelion, Picrorhiza kurooa na atịchok ma ọ bụ epupụta epupụta.
N'ikpeazụ, otu okwu banyere eriri afọ gall
Akwukwo aghara aghara aghara, n'ihi ikpe na mpụ, bụ ihe kachasị amasị ya. Mwepụ nke gallbladder bụ otu n'ime arụmọrụ kachasị na America.
Ghọta na eriri afọ anaghị arụ ọrụ maka imepụta nkume. Imeju bu onye ojoo - ma obu karie ihe anyi tinyere ya. Gallbladder bụ naanị ebe ejidere bile nke a ga-eji na mgbaze nke abụba na / ma ọ bụ mmanụ. Ma ọ bụrụ na nri anyị bara ọgaranya n'ụdị mmanụ na-ezighi ezi, ọ bụrụ na anyị nwere ihe nfụkasị na ngwaahịa mmiri ara ehi na akwa, obere mmiri acidic gastric, obere fiber na nri anyị, nrụgide, adịghị arụ ọrụ nke ahụ. umeji, wdg, nke ọma, mgbe ahụ bile mepụtara site na imeju (ngwakọta nke cholesterol, mineral, bile salts, pigments na lecithin) ga-enwe agbanwe agbanwe nke ga-eme ka obi sie ike ma na-adaba na "okwute" tupu ya asọpụta site na gallbladder.
Iwepu gallbladder anaghị ewepu nsogbu ọ na - ewepụ ihe mgbaàmà. Ee, ọ bụ eziokwu na mgbe ewepụchara gallbladder, ikekwe ị gaghị arịa ọrịa imeju ndị ọzọ. Mana n'aka nke ọzọ, ị gbanwere otu nsogbu maka nsogbu abụọ:
Ebe ọ bụ na ọ dịtụbeghị mgbe ị kwadoro nsogbu nsogbu nke imebi imeju, nsogbu ndị a ga-anọgide na-aka njọ, ikekwe imebi imeju ya.
Site n'iwepu gallbladder, ị na-ewepụkwa mmetụta ya na-achịkwa na bile. Nke a pụtara na bile na-aga n'ihu n'ime eriri afọ ọbụna mgbe a naghị akpọ ya. Nke a ga - ebute nsogbu gbasara nri na - adịghị ala ala, ọ ga - abụrịrị na ị ga - enwe nri edozi ahụ ogologo oge.
Ọ ka mma ịmechasị ihe na-eme ka ọ bụrụ nke gallbladder jikọtara ya na usoro mmezi oge karịa iwepu ya.
Mbupu nke imeju na ọnya afọ biliary
Site na ime ka imeju dị ọcha, anyị chọrọ ịgba ume iji kpochapụ abụba, cholesterol ochie, nkume, poisons, ụlọ ọgwụ na ihe mkpofu na-egbu egbu. Eleghị anya ọ dịghị ihe ọ bụla (gụnyere ọbụna purifying na detoxification nke eriri afọ) ga-enwe mmetụta dị otú ahụ na ahụike gị dum.
Mara: O di nkpa ime ka ahihia di ocha tupu ihicha imeju. Mgbe imeju na-agbapụta, ọ na-agbanye site na eriri bile nke na-eduga na eriri afọ. Ọ bụrụ na egbochi, ọnya ahụ (ma ọ bụrụ na ịchọrọ), mkpofu ahụ ga-alaghachi n'ọbara ma ọ nwere ike ibute ọrịa. Nke a bụ ihe kpatara ndị dọkịta na-arụ ọrụ ebube ji amalite mgbe niile site na mkpocha nsị. Nke a bụ ihe dị mkpa maka ihe ndị ọzọ niile na-ehicha ahụ - ma, n'ezie, ọ nwekwara ike mepụta ọgwụgwọ na-enweghị atụ.
Ihicha ụbọchị 5
Nke a bụ purifying imeju na gallbladder nke Dr. Richard Schulze kwadoro - na otu nke ọtụtụ ndị kwesịrị ịpụ. Purging bụ na afọ efu na ụtụtụ maka ụbọchị 5. Ihe mbụ ị ga-eme mgbe ị na-ebili n'ụtụtụ bụ ịṅụ 8 ounce mmiri dị ọcha iji kpochapụ usoro nsị gị. Otu awa mgbe e mesịrị, mix na a blender 8 ounces squeezed citrus ihe ọṅụṅụ (ọhụrụ apple ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ mmiri mkpụrụ osisi vaịn na residues ga-eme), a lemon, a kloovu nke garlic (tinye a kloovu ụbọchị ọ bụla), 1 tablespoon olive mmanụ table (tinye a tablespoon kwa ụbọchị), na a mpempe ginger (banyere 1 anụ ọhịa ogologo) na 8 ounce nke dị ọcha mmiri. Ṅụọ mmanụ a ma ṅụọ otu iko nke ihe ọṅụṅụ ọhụrụ iji mee ka ọnụ gị dị ọcha. Nkeji iri na ise ka e mesịrị, were iko abụọ detox maka imeju. Ọ dịkwa mkpa iji 2 tincture pipettes maka imeju nkwụsị, 3 na 6 ugboro n'ụbọchị, maka ụbọchị 5, ruo mgbe njedebe nke karama ahụ.
Ọ bara ezigbo uru ịzụta ụbọchị abụọ site n'inweta naanị nri nri na ụbọchị 3 site n'iji naanị ndị na-aṅụ mmiri n'oge a nke 5 ụbọchị ọcha.
Na ụtụtụ (mgbe ịṅụchara mmanya gị na otu awa tupu nri abalị), buru mkpụrụ osisi ma ọ bụ ihe oriri akwụ ụgwọ na ị chọrọ. Mmiri beet dị mma. Ejikọtala ihe ọṅụṅụ ndị na-amị mkpụrụ na akwukwo nri ndị na-eri ihe, ma ị nwere ike ịmegharị mmiri gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Maka nri abalị, ị nwere ike ịṅụ ihe ọṅụṅụ ndị ọzọ diluted, ma ọ bụ akwụkwọ nri ma ọ bụ ihe oriri. Ejichala ihe mgbakwasa salad. Mee mgbakwasa salad gị na mmanụ olive, ihe ọṅụṅụ lemon, apụl cider mmanya na mkpịsị ose nke nhọrọ gị. Ọ bụrụ na agụụ na-agụ gị n'ụbọchị, egbula oge iri nri ma ọ bụ were ihe ọṅụṅụ. Maka nri abalị, rie nkpuru ọ bụla ma ọ bụ ṅụọ ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi.
Mgbe ị nọ n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ, ṅụọ mmiri ọṅụṅụ na mmiri herbal na-atụgharị kwa ụbọchị - dị ka i nwere ike. Gbalịa iri nri 128 kwa ụbọchị.
A na-atụ aro ka e rie ọtụtụ iko nke potassium na-acha na mmiri n'ụbọchị. A na-eji broth potassium mee ya na potato peels (otu n'ime osisi potassium kachasị mma). Were bee ọzọ poteto (bụghị center), mgbe ahụ, tinye akwụkwọ nri tipsy, gụnyere karọt na bee, celery, dum beets (gụnyere epupụta), ọhụrụ pasili, eyịm na ọtụtụ na garlic (ruo 50 pods).
Obụpde obere okpomọkụ maka 40 na minit 60 n'ime mmiri na-ekpuchi na mmiri dị ọcha. Nyocha ihe niile, kpochapu ma ṅụọ mmiri. Richapu ihe ozo n'ime ihe ngba iko maka abia abia.
Otu maka 1 Day
30 nhicha ụbọchị
Rie otu iko nke chopped beets, tinye mmanu mmanu na lemon n'oge 30 ike ụbọchị.
Were tii na-eme kwa ụbọchị maka imeju na ume maka imeju.
Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya ya?
Ọ bụrụ na ị nwere ọchịchọ ime nke a (ọ ga-abụkwa), ị kwesịrị inyocha nkwụnye ego gị na nnukwu efere mposi. Hụ ma enwere "nkume" ọ bụla. Imeju nke imeju na-emepụta ụfọdụ acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ma lee ma ị ga-ahụ oji oji, uhie na aja aja. Hụkwa ma ọ bụrụ na o nwere nkume nwere ọbara. N'oge nhicha, ọ bụghị ihe a na-ahụkarị ịhụ ịgafe 2000 nke ụdị nkume a. Nwee obi ụtọ ka ọ na-agabiga, ahụike ka ị ga-abụ. I nwekwara ike ihu otutu ‘’ kristal ’’ nke cholesterol dị na nsị gị.
Tea na tinctures maka imeju
Ọ dị mkpa ịṅụ tii na tincture ka ị na-eme nke a.
The tii na-enyere aka na usoro mkpocha n'onwe ya, kamakwa iji belata nhụjuanya ọ bụla yana belata ọgbụgbọ. Mkpụrụ osisi ndị dị mkpa maka tii bụ dandelion, otu n'ime ahịhịa lipotropic siri ike mara taa. Nke ahụ bụ ịsị, ọ na-ewepụsị abụba na umeji. Ahịhịa ndị ọzọ enwere ike ịchọta na tii detox dị mma gụnyere ginger, clover, cinnamon, burdock root and horsetail. Site n'ụzọ, ụfọdụ herbs ndị na-eji ezi imeju detox tii (dịka Uva ursi, pasili mgbọrọgwụ na osisi junipa) dị oke uru nke akụrụ. Achịcha abụọ nke tii a ga-ekpochapụ minit iri na ise mgbe ị ṅụsịrị mmanụ citrus na olive mmanụ. Ma ị nwere ike ma kwesị iri ya ụbọchị niile. N'ezie, ị na-erichapụ tii taa maka imeju bụ ụzọ dị mma iji nọgide na-ebuli ike gị. (Egbula oge ịme ka tii na mmanụ aṅụ ma ọ bụ ezigbo sirop maple ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Na tincture a di nkpa n’ihi na o nwere ahihia nke na enyere umeju aka iwughari ma weghachi onwe ya. Uru nke abụọ bụ na ọ ga-belata oke ọnụọgụ LDL-ụdị cholesterol ewepụtara site na imeju. Nkpuru osisi di iche iche gunyere ogwu ogwu, dandelion, Picrorhiza kurooa (mgbe ufodu a na akpo kutkin ma obu “Indian thistle thistle”), na atishoki ma obu akwukwo akwukwo. Okwesiri itinye ahihia ahihia dika wormwood na ukpa ojii na imeju detox imeju. Na galik ị na-eji ihe na-ehicha imeju, nke a ga-eme ka ihe niile nje si n'ahụ gị pụọ. Were pipettes abụọ, 3 6 otu ugboro n'ụbọchị (dabere na ọrịa gị na ọkwa nke nkụda mmụọ) ruo na njedebe nke kalama ahụ.
Detox Plus na-agba ume Diuretic Slimming Depurative Liver na-eme ka nri gbarie ...
2 ọhụrụ site na .17,95 XNUMX
Zụta € 17,95
Emelitere ikpeazụ na October 29, 2020 8:09 am
Ha Na-abịa Tupu Columbus: Ebe Ịnọ n'Africa n'Amerịka America
Mkpụrụ Obi Ndị Dị n'Otu, otu akwa t-shirt na-emepụta nke Ivorian mere
Anya aka na Gold (2009)
*Site na ịdenye aha na weebụsaịtị anyị, ị kwenyere na Usoro & Ọnọdụ na amụma nzuzo.